Madaxweynihii hore ee Argentina oo dacwado lagu soo oogay | Baydhabo Online
Madaxweynihii hore ee Argentina oo dacwado lagu soo oogay
Madaxweynihii hore ee Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, ayaa lagu soo oogay dacwad la xidhiidha musuqmaasuq ku lug leh shirkad gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo Austral, taas oo ay dawladdu siisay qandaraasyo lacagahoodu badan yihiin. Waxaa kale oo la xayiray lacago malaayiin ah oo Ms Kirchner baanan u yaallay.
Xaakin heer federal ah ayaa ansixiyey eedaymaha lagu soo oogay Ms Fernandes kuwaas oo ah musuqmaasuq maamul iyo xidhiidh danaysi oo ay la yeelatay dad kale.
Xaakinku wuxu sidoo kale amar ku bixiyey in la xayiro 633 milyan oo dollar oo ka mid ah hantida Ms Fernandez.
Arrimaha lagu eedaynayo waxa ka mid ah in xukuumadeedu qandaraasyo dowladdu bixinaysay ay gacnta u gelisay ganacsade ay isku dhawyihiin qoyskeeda.
Hase ahaatee Cristina Fernandes waxay sheegtay in dacwaddu tahay mid siyaasadi dabada ka riixayso waxaanay ku eedaysay madaxweynaha talada hayaa u soo maleegay.
“Eedda ah xidhiidhka danaysiga ahi waa xeelad ay adeegsadaan keli taliyeyaasha dhamaantood si ay dadka siyaasadda kaga soo horjeeda ugu miidhaan” ayay ku tidhi qoraal ay ku baahisay bogga ay ku leedahay shabakadda twitter-ka.
Ms. Fernandez waxay sannadihii 2007 ilaa 2015 laba goor oo is xiga ka noqotay madaxweyne dalka Argantina, waxaanay xilka kala wareegtay saygeedii Nestor Kirchner oo isaguna xilka hayey intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2007. Waxaanay haatan ka mid tahay hogaamiyeyaasha ugu magaca dheer mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda midig dhexe ee madaxweyne Marci.